६० वर्षदेखि अमेरिकी नाकाबन्दी सहेर पनि क्युवाले सिकाउँदैछ ‘अन्तर्राष्ट्रिय एकता’ | Ratopati
क्युवा : विश्वव्यापी रुपमा नै विद्यमान खराब स्वास्थ्य अवस्थाबाट छुटकारा पाउन कसरी संभव छ भनेर बुझाउने जीवन्त उदाहरण
अहिले हामीले देखिरहेका र भोगिरहेका महाव्याधिको विश्वव्यापी अनुभवलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शब्द ‘संकट’ भएको छ । र, त्यसले मलाई राजनीतिक दर्शनशास्त्री अन्तोनियो ग्राम्सीले भनेका शब्दहरु स्मरण गराइदिएको छ, ‘संकट ठ्याक्कै त्यो तथ्यमा खरो उत्रन्छ कि बुढाहरु मर्दै गइरहेका छन् र नयाँ जन्मन सक्दैनन् । यस्तो मध्यान्तरमा धेरै अँध्यारा संकेतहरु देखापर्छन् ।’
के कोभीड–१९ ले भनेजस्तै अँध्यारो संकेत हो ? मलाई थाहा छैन । सम्भवतः उनले अन्य थुप्रै राजनीतिक लक्षणहरुका बारेमा सोचिरहेका थिए होलान् । आज ग्राम्सी जीवित हुन्थे भने सायद अमेरिकी सरकारको खराब व्यवहारको प्रतिरोध गरिरहेका देशहरु जस्तै भेनेजुयाला, क्युवा, चीन, निकारागुवा, रुस र अन्य थुपैं देशहरुमा उसले लाद्न खोजिरहेका एकाधिकारवादलाई पनि सम्भवतः त्यही अँध्यारा संकेतको संज्ञा दिने थिए होलान् । ढल्नै लागेको साम्राज्यको चरम भौतिक र मानसिक पीडा भनेकै के हो भने उसले कुनै पनि स्वस्थ र जीवितहरुमाथि नै प्रहार गर्ने गर्छन् ।
एन्टोनियो ग्राम्सी https://www.socialistalternative.org
आज ग्राम्सीजीवित हुन्थे भने सायद अमेरिकी सरकारको खराब व्यवहारको प्रतिरोध गरिरहेका देशहरु जस्तै भेनेजुयाला, क्युवा, चीन, निकारागुवा, रुस र अन्य थुपैं देशहरुमा उसले लाद्न खोजिरहेका एकाधिकारवादलाई पनि सम्भवतः त्यही अँध्यारा संकेतको संज्ञा दिने थिए होलान् । ढल्नै लागेको साम्राज्यको चरम भौतिक र मानसिक पीडा भनेकै के हो भने उसले कुनै पनि स्वस्थ र जीवितहरुमाथि नै प्रहार गर्ने गर्छन् ।
सर्वस्वीकार्य सीमालाई नाघ्दै आत्तिएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो र अन्य उच्च अधिकारीहरुको टाउकोको मुल्य तोकेका छन् र उनीहरुका बारेमा सुचना दिने वा पक्राउ गर्नेलाई २५ मिलियन अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् । यो सूचना हो कि हत्या ? अमेरिकाका राज्य विभागका लागि त्यो अर्थ विज्ञानको कुरा मात्रै हो । तर यो कुरामा शंका छैन, कोलम्बियामा अगस्ट २०१८ मा कोलम्बियामा विस्फोटक पदार्थ बोकेर गएका ड्रोनमार्फत् गर्न खोजिएको मदुरोको योजनावद्ध हत्याप्रयासका पछाडि अमोरिकाको नै हात थियो ।
वास्तवमै, अमेरिकाले गरेका राजनीतिक हत्यको सुची अत्यन्तै लामो छ । तीमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो त यसै वर्ष इरानी क्वाद फौजका प्रमुख जनरल क्वासेम सुलेईमानीको हत्या गरिएको घटना हो । यहाँ कसैले पनि पीडितका बारेमा आफ्ना फैसला सुनाउने काम नगरौं । न्यायको कठघरामा उभ्याइनुपर्ने भनेको हत्यारालाई हो ।
‘हामी सुपर हिरो हैन, क्रान्तिकारी डाक्टर हौं’
कोभीड १९ को महामारी फैलिएकै बेला केही दिनअघि मदुरोलाई मार्न अमेरिकी विदेश विभागले निर्देशन दिनुलाई ग्राम्सीले भनेजस्तै अमेरिकी प्रशासनका विथोलिएका सामुहिक मनस्थितिको अँध्यारो संकेतकै रुपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
तर यहाँ मैले अमेरिकी साम्राज्यका प्रबन्धकहरुको मनस्थितिको कुरामा मात्रै केन्द्रीत गर्न खोजिरहेको छैन ।
हामीले ‘क्राइसिस’ शब्दको उत्पत्ति खोज्यौं भने ग्रिक भाषाको शब्द krisis बाट भएको हो, जसकोे अर्थ नै ‘निर्णय’ भन्ने हुन्छ । संकटको यो गम्भीर घडीमा हामीले भविष्यलाई नियालेर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ । ती निर्णयहरु राजनीतिक पनि हुनसक्छ र हामी आशा गर्छौं त्यसले पुरानालाई दाहसंस्कार गरेर केही नयाँलाई जन्माउनेतिर दिशानिर्देश गर्नेछ ।
बहुसंख्यक क्युबाली जनतालाई गरिबी र अज्ञानताको खाडलमा जाकिरहेको अमेरिकी समर्थित कुहिएको सरकारका विरुद्धमा जनवरी १९५९ मा क्युबामा केही नयाँ उभार आयो । त्यसबाट त्यहाँ पैदा भएको नयाँ समाजले विगत ६० वर्षदेखि आफ्ना अर्थतन्त्रका विरुद्ध लादिएको भयानक नाकाबन्दीलाई झेल्दै आएको छ । आफूले भोगेका चरम संकटका बाबजूद उसले मानवताको एउटा अत्यन्तै उदाहरणीय मूल्य स्थापित गरेको छ, त्यो हो– ऐक्यवद्धता ।
नयाँ क्युबाली क्रान्ति सम्पन्न भएको केही महिनामै चे ग्वेभाराले ‘क्रान्तिकारी ओखती’बारे बोल्दै भनेका थिए – ‘हामीले गरेको भनेको सहयोगको अभ्यास थियो, अब हामीले गर्नुपर्ने अभ्यास भनेको ऐक्यबद्धताको हो ।’
सफलता सुत्र – अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता
मैले आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा क्युवाली स्वास्थकर्मीसँग काम गरें, क्युबाको उत्कृष्ट जनस्वास्थ्य प्रणाली नियालें ।
यो सम्पूर्ण भूभागलाई समेटने पूर्ण सामुदायिक लगानीको प्रणाली हो । क्युबाको स्वास्थ उपलब्धि मापन गर्ने बलियो आधार यसको औसत शिशु मृत्युदर हो, जुन विश्व बैंकको सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार प्रति हजार ३.७ प्रतिशत मात्रै छ । जबकी, अमेरिकामा यही मृत्युदर प्रतिदर ५.६ प्रतिशत छ । क्युवाको यो सफलता प्राथमिक रुपमै रोकथाममा ध्यान दिने दृष्टिकोणको उपज हो ।
त्यहाँका संस्थाहरु बलियो हुनुका मुख्य कारण क्युबाली समाजको ऐक्यबतापूर्ण भूमिका नै हो । कोभीड–१९ लाई क्युबाले सफलतापूर्वक सामना गर्न सक्नुको पछाडिको मूल कारण पनि त्यही सामाजिक ऐक्यबद्धता नै हो, जसले गर्दा यो लेख्दासम्म क्युबामा ८० जना संक्रमित भएपनि कसैको मृत्यु भएको छैन । *
राष्ट्रपति डियाज केनलले भर्खरै भनेका थिए, ‘हामी सबैजना सबैसँग र व्यक्तिगत रुपमा एक–आपसमा निर्भर छौं ।’ अमेरिकी प्रशासनले नाकाबन्दी गरेको देशका जनतासँग महामारीविरुद्ध लड्ने आवश्यक सामाग्री भए–नभएको यकिन गर्न सामुदायिक नेता र स्वास्थ टोली झन्डै ६४ लाख ३ हजारको घरमा पुग्यो ।
घरेलु मामिलामा देखिएको ऐक्यबद्धतासँग विश्वव्यापी स्तरमा क्युबाली प्रोग्राम अफ मेडिसिन कोअपरेशनमार्फत उसले देखाएको व्यवहार मिल्दोजुल्दो छ । यो कार्यक्रमको व्याख्यामा उल्लेख भएअनुसार, यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको मान्यतामा आधारित छ र यो सन् १९६३ मा अल्जेरियामा स्वास्थकर्मीको टोली पठाएर शुरु भएको थियो ।
घरेलु मामिलामा देखिएको ऐक्यबद्धतासँग विश्वव्यापी स्तरमा क्युबाली प्रोग्राम अफ मेडिसिन कोअपरेशनमार्फत उसले देखाएको व्यवहार मिल्दोजुल्दो छ । यो कार्यक्रमको व्याख्यामा उल्लेख भएअनुसार, यो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको मान्यतामा आधारित छ र यो सन् १९६३ मा अल्जेरियामा स्वास्थकर्मीको टोली पठाएर शुरु भएको थियो । आफ्नो रिसर्च पेपरमा मैले स्वस्थ भविष्यको आशाका लागि स्वास्थ्य र हेरचाहमा क्युवाले अपनाएको ऐक्यबद्धताको उदाहरण पेश गरेको छु ।
स्वास्थले प्रत्यक्ष रुपमा मानव जीवनसँग सरोकार राख्छ र पनि यसका लागि स्रोतहरु कम छन्, यस्तोमा हामीले कठिन प्रश्नहरु गर्नुपर्छ – मानव जीवनको मूल्य के हो ? व्यापार प्रतिबन्ध कति स्वीकार्य छ –र छ भने त्यसलाई मानव जीवनका लागि बनाउन सक्छौं ? हामीले समाजका रुपमा एउटा बच्चाको जीवन जोगाउन कस्तो त्याग गर्ने इच्छा राख्छौं ? यी प्रश्नहरु दार्शनिक प्रश्नहरुभन्दा माथिका कुरा हुन् । यी प्रश्नहरुकै सेरोफेरोमा हामीले गर्ने निर्णयले हामीले कल्पना गरेको समाज कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।
म र मेरा क्युवेली साथीहरुले बुझेअनुसार सीमित स्रोतका बाबजुद देशभित्र र विश्वका अन्य देशमा पनि क्युवाले मानव जीवन रक्षार्थ बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरेको छ । ठूलो जनसंख्याको स्वास्थ्य जोगाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने राम्रो समय संकटबाहेक अर्को हुनसक्दैन ।
पछिल्ला केही साता कोभीड–१९ सँग लड्न सहायता माग गर्ने धेरै देशहरुमा क्युबाली स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको खबर आइरहेका छन् र यसलाई कर्पोरेट मिडियाले पनि लुकाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि, कन्जरभेटिभ नेशनल पोस्टले चीन र रुससँगै कम्युनिष्ट मुलुक क्युवाले नाटो सदस्य मुलुक इटालीमा समेतमा गरेको मुल्यवान् योगदानको स्वीकार गरेको छ ।
यसबीच, पुँजीवादी अमेरिकाले आफ्ना सरकारलाई क्युवेली डाक्टर नबोलाउन निर्देशन दिएको छ । ह्वाइट हाउस ती क्युवेली डाक्टरमाथि खनिएको छ, जसले आधा शताब्दीको इतिहासमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन, मध्यपूर्व र एशियाका १ सय ५० देशमा ४ लाखभन्दा बढी सहकार्यहरु गरेर आफ्नो स्वास्थ मिसन सञ्चालन गरेका छन् । यो स्थितिमा अमेरिकाको तर्क यो गैरजिम्मेवार हो र त्यो मानवीय एकताको विरुद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘मेडिसिन्स सान्स फ्रन्टियर्स’ ले कोभीड १९ को घातक भारी सहज बनाउन गरिरहेको प्रयास प्रशंसनीय छ । हामीले प्रशंसा गर्न नसक्ने वास्तविकता यस्तो डरलाग्दो विषय अनपेक्षित जुटाएर गरिने च्यारिटीमै निर्भर गर्छ भन्ने हो ।
सारमा, संकटका बेलामा, जस्तो ज्यानमारा महामारी फैलिरहेको बेलामा, हामीले संकटलाई झनै महाखराब बनाउने पुराना धारणा त्याग्नुपर्छ र हामीले नयाँ र प्रष्ट मापदण्ड बनाउनका लागि योजना र रणनीति खोज्नुपर्छ । हामीले निष्पक्ष भएर हेर्यौं भने प्रशस्तै उदाहरणहरु पाउन सक्छौं । क्युवा त्यस्तो जीवन्त उदाहरण हो, जसले पछिल्ला इतिहासमा कहिल्यै अनुभव नगरिएको अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै विद्यमान खराब स्वास्थ्य अवस्थाबाट छुटकारा पाउन कसरी संभव छ भनेर बुझाउँछ ।
मानवीय मूल्यका आधारमा निःशुल्क सहयोग (च्यारटी) भन्दा नितान्त भिन्न, बहुजन हितायका लागि सामाजिक संगठनहरुमा गरिनुपर्ने कार्य ऐक्यवद्धता नै हो । ऐक्येवद्धताको अभ्यास अवस्थातिको जागरुकताले निर्देशित हुन्छ र त्यसले सामाजिक परिवर्तन वा वा शक्ति– सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्छ ।
सहयोगको पर्यायवाचीका रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई फराकिलो दायरामा वैदेशिक सम्बन्धको आधार स्तम्भको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । वैमनस्यता र असहमतिभन्दा ऐक्यबद्धताका आधारमा कायम वैदेशिक सम्बन्ध कस्तो हुन सक्छ ? क्युबाले त्यो सम्भव छ भनेर देखाएको छ ।
एजेन्सीको सहयोगमा रातोपाटीको लागि अन्वेषण अधिकारीकोअनुवाद :ग्लोबल रिसर्चबाट
(*अपडेटः यो लेख अपलोड गर्दाको समय २०७६ चैत्र २१ गते दिउँसो २ः१५ बजेसम्ममा क्युबामा २३३ जनामा संक्रमण फेला परेका छन् । तीमध्ये १३ जना निको भएका छन् भने ६ जनाको निधन भइसकेको छ । –रातोपाटी)